12 Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 12 Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan
Tareen safarka Giriigga, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 25/02/2022)
Haddii dhagaxyadii macbudka qadiimiga hadli kara, waxay ka hadli lahaayeen xadaarado hore, duullaan, dhaqamada, iyo jacayl. The 12 Inta badan Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan si wanaagsan ayaa loo ilaaliyaa oo soo jiidanaya quruxda iyo taallada. Laga soo bilaabo macbadyada Fircoon ee Masar ilaa Buddhist iyo macbadyada Hindu ee Koonfur-Bari Aasiya, macbudyadan qadiimka ah waa dhagaxyo taariikhi ah.
1. Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Palace ee Knossos
Goobta cibaadada iyo xarunta nolosha siyaasadda ee xilligii Bronze, Palace of Knossos waa mid ka mid ah macbadyada qadiimiga ah ee adduunka oo dhan. Macbadka Knossos wuxuu ahaa xarunta ilbaxnimada Minoan ee Crete. Waxaa intaa dheer, macbadka qadiimiga ah waa mid ka mid ah macbadyada ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo adduunka.
Macbadkii ugu horreeyay ee Knossos waxaa la dhisay 1900 BC buur, laakiin mid ka mid ah dhulgariirkii badnaa ee Kereetee wuu baabbi'iyey. Si kastaba ha ahaatee, Isla markaa ka dib macbad kale ayaa la dhisay oo ku burburay qarax foolkaanooyin ah. Sayidka, macbadka Knossos ee taagan maanta waa kan 3rd macbudka ka 1375 BC. Macbadka Knossos waa mid ka mid ah macbadka meelaha geeks taariikhda top iyada oo halyeyyadeeda ay ku jiraan hadhaagii.
Hordhac Stonehenge by 6,000 sano, Dhagxaanta Gobekli ee koonfur bari Turkiga ayaa la aaminsan yahay in ay yihiin hadhaagii macbudkii ugu horeeyay ee abid dunida laga sameeyo. The 11,000 Dhagxaan Gobekli Tepe oo jir ah ayaa ahaa goob cibaado oo buur ku taal.
Si kastaba ha ahaatee, Ma jiraan wax natiijo ah oo ka soo baxay degitaanka dadka ee gobolka, laakiin goobtu waxay ahayd meel ay u socdaalaan dad badan oo reer guuraa ah oo ugaadhsada iyo urursada. Sidaas, macbudka Gobekli Tepe wuxuu u adeegay sidii meel quduus ah, oo leh diin muhiim ah.
3. Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Hagar Qim
Lagu sameeyay a 20 tones dhagax megalith ee xarunta, Macbadka Hagar Qim waa mid ka mid ah macbadyada ugu cajiibsan adduunka oo dhan. Sayidka, Hagar Qim sidoo kale waa macbadka caadiga ah ee ka yimid taariikhda hore ee Malta.
Mid ka mid ah sifooyinka aan caadiga ahayn ee macbadka Hagar Qim waa dalool elliptical ah oo ku yaal mid ka mid ah labada qol.. Maalinta koowaad ee xagaaga, fallaadhaha qorraxdu waxay soo maraan godkan waxayna iftiimiyaan dhagax dhagax ah. Waxaad booqan kartaa Hagar Qim safarkaaga Malta, oo u bogo mid ka mid ah 12 macbadyada ugu qadiimiga ah ee aduunka.
4. Macbadyo Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Macbadka Seti
Aad loo ilaaliyo, Macbadka Seti wuxuu ka yimid boqortooyadii sagaal iyo tobnaad. Macbadka Seti waa abuurista Seti iyo wiilkiisa Ramses II. Aabuhu wuxuu bilaabay abuurista, halka inankii uu dhameeyay qurxinta iyo daaradaha ku wareegsan.
maanta, waxaad booqan kartaa macbadka Seti, a maalinta safarka ka yimid Qaahira. Markaad halkaas jirto waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa qoraallada Abydos ee ku yaal derbiyada macbadka.
5. Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Macbadka Hypogeum
Macbadka ugu qadiimsan dhulka hoostiisa ee aduunka waa macbadka Hypogeum ee Malta ku yaal ee sida wanaagsan loo ilaaliyo. Macbadka cajiibka ah waa 6,000 sano jir ah, 3 Heerarka macbudka qadiimiga ah ee qolalka isku xiran.
Macbadka Hypogeum wuxuu ahaa marka hore goob cibaado iyo duco, laakiin markii dambe macbudkii qadiimiga ahaa wuxuu isu beddelay meel lagu aaso. Soo-booqdayaashu waxay u riyaaqi karaan rinjiyeynta cas ee gidaarada, rinjiyeynta kaliya ee taariikhda hore ee jasiiradaha Malta. Intaa waxaa dheer, Waxaad arki kartaa farshaxanada gaarka ah ee laga helay macbadka Valletta Museum.
6. Macbadka Luxor
Markaad dhex marayso qolalka macbadka Luxor, waxaad dib u socotaa boqolaal sano oo taariikh ah. Tallaabo kastaa waxay kugu hogaaminaysaa da'dii Ramses II, iyo noloshii diineed ee Masar hore.
Macbadka Luxor wuxuu macno weyn ku leeyahay diintii hore ee Masar. Intaa waxaa dheer, Waxay ku taal macbudka Luxor in Ilaah Amon la kulmay dib u dhalashadii intii lagu jiray taajkii sannadlaha ah ee Fircoon..
7. Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Stonehenge
Goobabada dhagaxa weyni waa mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu weyn taariikhda. Stonehenge wuxuu u taagan yahay kibir gudaha Wiltshire, England. Waxay soo jiidataa boqolaal booqdayaal ah si ay u majeertaan. Khubarada taariikhda iyo qadiimiga adduunka waxay aaminsan yihiin in druids ay dhiseen Stonehenge.
Stonehenge waxa uu lahaan kara ujeeddooyin diimeed wakhtiyadii hore. Mid ka mid ah calaamadaha waa habaynta dhagaxyada iyo xaqiiqda ah in taalladu ay u jeeddo qorrax ka soo baxa. Iyadoo aan weli la caddayn sida loo keenay dhagxaanta waaweyn ee meeshan gaarka ah ee Ingiriiska, Stonehenge waa mid ka mid ah macbadyada ugu caansan ee lagu booqdo adduunka oo dhan.
8. Macbadyada Ggantija
Ggantija qadiimiga ah ee Malta ayaa ka dhex muuqda 12 macbadyada qadiimiga ah ee adduunka oo dhan. Tani waxay mahad iska leedahay xaqiiqda ah in ay tahay laba macbadyo isku dhafan. Waxaa intaa dheer, Gantija macbadyadu waxay heleen magacooda iyadoo ay uga mahadcelinayaan dhagxaanta waaweyn ee dhisayay.
Waxaa intaa dheer, marka lagu daro booqashada mid ka mid ah macbadyada ugu waaweyn adduunka oo dhan, waxaa laga yaabaa inaad dhex lugayn karto taallada dhagaxa ugu da'da weyn adduunka.
9. Macbadyo Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Macbadka Amada
Macbadyada Masar ayaa caan ka ah adduunka oo dhan marka loo eego cabbirkooda quruxda badan, iyo naqshadeynta. Macbadyada Masar waxa lagu yaqaan inay yihiin macbadyada ugu quruxda badan adduunka oo dhan. Waad ku mahadsan tahay hieroglyphs iyo sawir-gacmeedka derbiyada, Macbadka Amada maaha mid ka reeban quruxda.
Kan yar, Laakiin macbadka Amada oo cajiib ah ayaa gidaarada ku yaal sawirro qurux badan. Qoraaladu waxay wadaagaan dhacdooyin muhiim ah taariikhda Masar sida duulaankii Liibiya ee Masar. Sidaas, haddii aad rabto inaad booqato macbadyada ugu da'da weyn ee Lake Nasser, boorsooyinkaaga xidho oo u sii jeed Nubia.
Macbadka ugu faca weyn Hinduuga aduunka, macbadka Mundeshwari wuxuu ku yaalaa Kaimur. Yar, laakiin cajiib ah xardho dhagax ah, macbudka waa calaamad u ah Rabbiga Shiva iyo Shakti. Soo-booqdayaasha macbadka Mundeshwari waxay la dhacsan karaan sawir-gacmeedyada xiisaha leh ee laga soo bilaabo xilligii Gupta iyo noloshii soo laabashada 625 BC.
Macbadka quruxda badan wuxuu ku yaalaa buurta Mundeshwari, halkaas oo laga helay alaabo kale oo badan oo muhiim ah. Haddi aad la dhacsan tahay oo leh taariikhda Hinduuga, waa inaad booqataa macbadka Mundeshwari. Waxaad ogaan doontaa wax badan oo ku saabsan astaanta Lord Shiva iyo Shakti inay wada deggan yihiin hal meel oo gaar ah.
11. Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan: Borobudur Indonesia
Macbadka Borobudur ee Indonesia wuxuu caan ku yahay inuu yahay macbadka Buddhist ee ugu weyn adduunka. Maanta Buddhist badan ayaa booqda macbadka Borobudur ee xajka ee jasiiradda Java.
Markaad booqato Macbadka Borobudur, Waad yaabi doontaa inaad aragto 56,000 mitir cubic dhagax volcano cawl ah oo ka samaysan macbadkan Buddhist.
12. Macbadka Hatshepsut
Quduusyada Qudduuska ah, Macbadka Hatshepsut wuxuu ka yimid qarnigii 18aad. Fircoon Hatshepsut wuxuu macbudka ka dhisay jararkii Deir El-Bahri, sidaas darteed wejiga macbudka ee ka soo horjeeda jararka’ muuqaalku waa mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsan adduunka oo dhan.
Macbadka qadiimiga ah wuxuu ka yimid xilligii Boqortooyada Cusub, laakiin sannadihii la soo dhaafay macbudku waxa uu ka beddelay ujeeddadii macbudka oo u beddelay keniisad. Deyr El-Bahri macnaheedu waa “Waqooyiga Monastery”, oo xitaa waxaa jira kaniisad ku dhex taal barxadda Temple Hatshepsut.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka kuwaan 12 Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan.
Ma doonaysaa in aad geliso bartayada boggaga "12 Macbadyada Qadiimiga ah ee Adduunka oo dhan" oo ku yaal boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa /fr ilaa /pl ama /de iyo luqado badan.
Fasaxyada Xeebta ee Tareenka ee Beljamka